Indawo yokufihlakala kwiiLofts zeMbali yeArmory - I-Airbnb
Indawo yokufihlakala kwiiLofts zeMbali yeArmory
Ifakwe kumbindi wedolophu yeBowling Green. Indlu encinci, yesitudiyo enayo yonke into oyifunayo emva kobusuku edolophini okanye kwishishini lokuhlala. Qiniseka ukuba ujonge iMyuziyam yaseCorvette, iFountain Square, kunye nazo zonke iindawo zokutyela ezinkulu kunye neevenkile kwisikwere. Ifumaneka ezantsi kwenduli ukusuka eWKU.
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwiflethi ngexesha lokuhlala kwazo - kubandakanya iwasha kunye nesomisi. Izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nesikhenkcezisi esipheleleyo senza kube lula ukucwangcisa kunye nokulungiselela ukutya. Umnyango osecaleni kweMellow Mushroom, iibhloko ezimbini ukusuka kwimbali yaseFountain Square Park kunye nekofu yeSpencer kunye neendawo zokutyela ezininzi ezintle.
Ibekwe embindini wayo edolophini. Umgama omfutshane wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela ezininzi, iipaki, kunye neSkypac.
Izimvo eziyi-2 527
Umamkeli uyafumaneka kwimibuzo. Nceda uthumele umyalezo ku-Airbnb kuqala, emva koko ufikelele ngefowuni okanye ngeSMS.